Kan Daud Ibsaa waliin hidhata qabu Girmaa Xurunaa qofa osoo hin taane namni maqaan isaa Sheeraa je’amus qunnamtii kan caalu qaba. – Welcome to bilisummaa
Kan Daud Ibsaa waliin hidhata qabu Girmaa Xurunaa qofa osoo hin taane namni maqaan isaa Sheeraa je’amus qunnamtii kan caalu qaba.
Namni maqaan isaa SHEERAA je’amu bara 2012 keessa Asmaraa irraa gara biyyaa ergama.
Akkuma Sheeran biyya seeneen humni tikaa Wayaanee haala mijjeesaniifii akka warreen
Asmaraatti hafan waliin yeroo barbaachisaa tahetti qunnamtii tolchu taasisan. Sheeraan yeroo
fedhetti telefoonaan ykn i-meeliin kanneen Asmaraa jiran qunnamaa ture ammas qunnamaa
jira. Sheeraan hojiin isaa inni guddaan dhaabarraa ergameen dhufe jechuun dargaggoo oromoo
biyya keessaa fedhiin bilisummaa kakaafte walitti qabee yeroo isaan gurmaa’wan hiisisuu dha.
Dardaroota oromoo ABOn karaa bahaa jiran, karaa lixaa jiran ykn karaa kibbaa jiran walin isin
qunnamsiisa jechuun innis akkuma Girmaan gochaa jiru gandarraa isaan kaasee yeroo isaan if
kennuu isaanii argu humna tikaa Wayyaanee itti yaamuun mana hidhaatti darbuu dha.
Maqaan isaa dhaaba biratti Sheeraa jechuun beekama haatahu malee yeroo biyya seenee
namoota qunnamuu eegale maqaa hedduu baafachuudhaan namoota maqoota adda addaatiin
1 Obsaa Mohamed 2 Shamsudiin Abrahim 3 Shadii 4 Tulluu 5 Berhan Desta 6 Gaagaa fi kkf…
Namoota ABOn Asmaraa irraa humna addaa jechuun SBO irratti himatan keessaa kanneen hin
hidhamin hafan tokkolleen hin jiran. Namoota Sheeraan hiisise keessaa hangi tokko akka
Ahmad Jundii Keeniyaarra as deebisee hiisise
Waraana saglii takka ykn nama 8 meeshaa waliin diqamaaf gara Ciroo soso’aa je’ee yeroo isaan
Birraa Sabaa Somaaliyaarra yaamee yeroo inni biyya seenu hiisise
Daud Ibsaa yeroo namni kun takka qabsiisu irra kutee namni lammaffaa yeroo qabamu maaliif
qabaman je’ee hin gaafanne. Hagga har’aa yeroo namni kun namoota kana dila qabsiisee
ajjeesisu homaa dhaabufillee yaalii hin goone. Akka tahettuu lubbuu baafatanii kanneen
Keniyaa fi Somaaliyaa seenan yeroo haalli mijaahufitti as bahanii dubbachuun isaanii hin oolu.
Ammatti nuti humna hin qabnu, yeroon keenya ni dhufti jennee abdannee jiraanna.
Previous Adda Walabummaa Demokratawa Oromiya (AWDO) Front for Independent Democratic Oromia (FIDO)
Next Re: Questions raised in relation ‘Invitation to Sidama Loqqee massacre’ and others massacres commemorative conference